China inotonhora shrinkage tambo accessories accessories Mugadziri uye mutengesi | Nhoroondo
Iyo inogadzirwa kubva kunounzwa-SiR (Silicone Rubber) ine inogutsa yemagetsi kuputira, yakatanhamara kusimba kwekutevera kuramba, ngura kuramba nezvimwe, pamwe nemvumo yemagetsi kugona uye hwakareba-hupenyu hwehupenyu. Inogona kushandisa zvine mwero radial kumanikidza pane tambo nguva dzese kugadzira yekudyidzana compact mushure mekuisa.
Zvakare ichawedzera kana kudzikira pamwe chete netambo kunzvenga tip-uye-kumhanya mhirizhonga kunokonzerwa nekufema tambo yekufema. Iko kushushikana uye kwekutanga kuputira zvinoumbwa seimwe kuverengera kuputira kunovimbika nekuita zvakachengeteka nekugadzirisa dambudziko rekushushikana kwekushushikana pamutsara weiyo semiconductive rukoko.
2.Simple uye nyore kugadzwa
Nekushandisa kweiyo chaiyo inotonhora shrinkage maitiro akagadzirwa ne Histe Co, Ltd, imwe isina yakakosha kudzidziswa inogona kuigadzirisa pasina mubatsiri wemoto, magetsi. Maitiro acho ari nyore uye anoponesa vashandi.
Iyo inokwana padenga remaoko, basa remumunda uye rinoshanda munzvimbo inopisa kunyanya, senge, emugodhi wemarasha, nzvimbo yemafuta uye pasi pe-tsime. Saka zvinoderedza zvakanyanya tsaona dzemhando yepamusoro dzinokonzereswa nekusaita basa.
3.Excellent kemikari kugona
Feculence-kuramba, alkali kuramba, kuchembera kuramba, yakakwana hydrophobic kuita, kupisa kwakanyanya uye kutonhora kuramba inosanganisirwa. Iyo chaiyo yekushanda tembiricha inoshanda kubva -70 ℃ kusvika + 120 ℃. Naizvozvo chigadzirwa ichi chinogona kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakakwirira, kutonhora, hunyoro, munyu uye nzvimbo dzine hutsi pamwe nenzvimbo dzine hurema.
Ichi chigadzirwa chiri nyore-kumisikidza, yakashambidzika, uye inotaridzika. Icho chinhu chakakodzera kusangana nematanho epamusoro ebasa rekuvaka. Nekutora yakatarwa chaiyo, ichi chigadzirwa zvakare chinogona kushandiswa pakuvhara kwekutonga, kutaurirana, yakaderera voltage tambo. Saka inotsiva kuputirwa kwepurasitiki yekuisa chisimbiso.
Pashure: China Mugadziri Wehupfumi Type Yemhando Voltage switchgear Magetsi Magetsi Kugovera Cabinet
Zvadaro: Kupisa kutengesa kupisa shrink tambo kubviswa